ဗုဒ္ဓပညာ (သို့) အမှန်တရားဆိုတာ… (စာရေးဆရာကြီး နန္ဒာသိန်းဇံ အမှတ်တရ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » ဗုဒ္ဓပညာ (သို့) အမှန်တရားဆိုတာ… (စာရေးဆရာကြီး နန္ဒာသိန်းဇံ အမှတ်တရ)
ဗုဒ္ဓပညာ (သို့) အမှန်တရားဆိုတာ… (စာရေးဆရာကြီး နန္ဒာသိန်းဇံ အမှတ်တရ)
Posted by True Answer on Aug 16, 2011 in Other - Non Channelized, Society & Lifestyle |5comments
စာရေးဆရာကြီး နန္ဒသိန်းဇံ (အသက် ၆၅ နှစ်) သည် သြဂုတ်လ ၁၄ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ ည ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံ ကြီး ၌ အဆုတ်ရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။
ကွယ်လွန်ချိန်အထိ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဒဿနိကဗေဒ ပါမောက္ခအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားခဲ့သူ ဆရာကြီး၏ ရုပ်အလောင်းအား ရေဝေးသုဿာန်တွင် ကြာသာပတေးနေ့၌ ဂူသွင်း သဂြိုင်္ဟ်မည်ဖြစ်သည်။
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ယူစဉ်က တင်သွင်းခဲ့သော ကျမ်းကို ”ဘ၀အဓိပ္ပာယ်နှင့် ဘ၀သစ္စာ” အမည်ဖြင့် ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် လုံးချင်းအဖြစ် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဘ၀ဒဿနများနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာစာပေများကို ကွယ်လွန်ချိန်အထိ ရေးသားခဲ့သည်။
ကွယ်လွန်ချိန်အထိ စာအုပ် နှစ်ဆယ်ခန့် ရေးသားခဲ့ကာ ဆောင်းပါးရာနှင့်ချီ၍ ရေးသားခဲ့ကာ ယင်းတို့ထဲမှ “ဘ၀အဓိပ္ပါယ်နှင့် ဘ၀သစ္စာ”၊ “ခရောင်းလမ်းကို ဖြတ်ကျော်ခြင်း”၊ “မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနှင့်ခရီးသွား ခြင်း” တို့မှာ လူကြိုက်များသော စာအုပ်များဖြစ်သည်။ “ခရောင်းလမ်းကို ဖြတ်ကျော်ခြင်း” မှာ ၁၉၇၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် လုပ်သားများကောလိပ် ဒဿနိကဗေဒအသင်း၌ ဟောပြောခဲ့သော“ဘ၀ခရီး အတွက် အတွေးအမြင်များ” ကို ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်သည်။
ဆရာကြီး နန္ဒသိန်းဇံကို အဖ ဦးညီကွန်းနှင့် အမိ ဒေါ်ဟန်တင်တို့မှ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၁) ရက်၊ သောကြာနေ့တွင် ပဲခူးတိုင်း ပေါင်းတည်မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မွေးချင်း (၃) ယောက်အနက်အငယ်ဆုံးဖြစ် သည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် ဖြေဆိုသည့် အထက်တန်း စာမေးပွဲ၌ ပဲခူးတိုင်းတတိုင်းလုံးတွင် ပထမရခဲ့သည်။
ထို့နောက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ဒဿနိကဗေဒ အထူးပြုဖြင့် ပညာသင်ယူခဲ့ပြီး ၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင် ဒဿနိက ၀ိဇ္ဇာတန်း အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် မဟာဝိဇ္ဇာတန်း အောင်မြင်ခဲ့သည်။
ဆရာကြီးသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဒဿနိကဗေဒဌာန၌ နည်းပြဆရာအဖြစ် ၁၉၇၀ ခုနှစ် မေလတွင်စတင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်၊ ထားဝယ် ကောလိပ်နှင့်ပုသိမ်ဒီဂရီကောလိပ်တို့ တွင်လည်း ဒဿနိကဗေဒ နည်းပြဆရာ၊ ဌာနမှူးနှင့် ကထိက တာဝန်များ ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
၁၉၈၀ တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဒဿနိကဌာန၌ လက်ထောက်ကထိက ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ၁၉၈၈ တွင်ကထိက အဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် တွဲဖက်ပါမောက္ခအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ပါမောက္ခ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ကွယ်လွန်ချိန်အထိ အမှုထမ်းခဲ့သည်။
ဆရာကြီးအား ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့တွင် မဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇဘွဲ့ချီးမြှင့်ပေး အပ်ခဲ့သည်။
စာရေးဆရာကြီး နန္ဒသိန်းဇံ ဟောပြောပွဲ အသံဖိုင်ကို မျှဝေအပ်ပါသည်။ အောက်ပါလင့်တွင် နားဆင်နိုင်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓပညာ (သို့) အမှန်တရားဆိုတာ…
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … download လုပ်ထားလိုက်ပါတယ် … အေးအေးဆေးဆေးအချိန်ရတော့မှ နားထောင်တော့မယ် …
ဆရာကြီးစာအုပ်တွေ မဖတ်ဖူးဘူး။ ဆယ်ကျော်သက်လောက်ကတော့ လူရာဝင်ချင်လို့ ကြိုးစားဖတ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဝေးလွန်းလို့ လက်လျော့ခဲ့ရတယ်။ နည်းနည်းကြီးလာတော့လည်း ဟိုသင်တန်းဒီသင်တန်းစာတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေပြန်ရော။ နိုင်ငံခြားရောက်တော့လည်း အွန်လိုင်းမှာ သူ့ထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့စာတွေ ဥပမာ – သိုင်းဝတ္ထု၊ မင်းသိင်္ခ၊ တွတ်ပီ၊ ပိုးဇာကာတွန်း စာအုပ်အဟောင်းတွေနဲ့ ပြီးသွားပြန်တယ်။ တနေ့နေ့တော့ ဆရာ့စာတွေဖတ်ဖို့ ကြိုးစားပါအုံးမယ်။ အမှန်ဝန်ခံရရင် ဒဿနစာပေတွေဖတ်ဖို့ စိတ်မရှိသေးတာ အမှန်ပဲ..။ ဖတ်နိုင်သူ ခံစားနိုင်သူများကို ဦးညွှတ်ပါတယ်။
;) ကိုကြီးကြောင်ကတော့ လုပ်ပြီ။
ကိုကြောင်ကြီး သဲအင်းဂူဆရာတော်ကြီးတရားတွေ နာနေ-အားထုတ်နေတယ်မဟုတ်လား။
အရင်တုန်းက ဆရာကြီးစာတွေ နားမလည်ပေမယ့်
ခု နေ ဒဿနစာတွေ ပြန်ဖတ်ကြည့်ရင် အလွယ်လေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်။း)
တစ်ကယ်လို့ မလုပ်ကြည့်ရင်တောင် ဖတ်ကြည့်ရုံနဲ့တင်
မိမိစိတ်ကို ဘယ်လိုအဆင့်မြင့်အောင်မြှင့်လို့ရသလဲဆိုတာကို သဘောလောက်တော့
(ကိုယ်ကတော့ ဖတ်ပြီးပြီ ၊ နည်းနည်းလေးတော့လုပ်ကြည့်ဘူးတယ်။ နည်းနည်းလုပ် နည်းနည်းတော့သိသာတယ်။ အခုတော့ဆက်မလုပ်ဖြစ်တာကြာပြီ )
Too bad, we loosed another Buddhist scholar. I love Buddhism in philosophically. This author is one of my top-15 list. .